Siyaasi Mexico U Dhashay Oo Cunsuriyeeyay Ronaldinho.
September 16, 2014 - Written by editor24
Ronaldinho oo dhawaan ku biiray kooxda reer Mexico ee Queretaro ayaa waxa uu aflagaado cunsurinimo ah kala kulmay siyaasi maxali ah kaasoo ku tilmaamay inuu yahay daanyeer. Kooxdiisa cusub ayaana dalbatay in la ciqaabo siyaasigaas si uu tusaale u noqdo.
Carlos Manuel Treviño, oo ah xubin ka tirsan xisbiga mayalka adag ee National Action Party (PAN) tan iyo 2000 islamarkaana soo ahaa wasiirka horumarinta ee dowlada hoosee e Queretaro ayaa ka carooday wadada oo ku xiran madaama garoonka La Corregidora lagu soo bandhigayay saxiidooda cusub Ronadinho.
“Waxaan xaqiiqdii isku dayayaa inaan dulqaato, laakiin waan necbahay kubada cagta iyo sida qof walba ay uga dhigto dabaalo. Waxaanse ka sii necbahay marka dadka ay ku soo fatahaan jidadka islamarkaana ay iga horjoogsadaan halkaan u socday, waxa ay la micno tahay inaan gurigeyga gaarayo labo saac ka dib, waxaan intaas loo sameynayaa in la arko daanyeer, waa Brazilian laakiin waa daanyeer. Gole ciyaareedka xaywaanada waxa uu noqday mid doqonimo ah.” ayuu Trevino ku qoray bogiisa Facebook.
Hadalkiisaas ayaana keentay carro badan taasoo ku kaliftay siyaasida inuu tirtiro qoraalkiisa ka dib markii uu jawaabo boqolaal gaaraya ka helay, laakiin waxaa durbaba sii qaatay warbaahinta Mexico.